Guddiga doorashada Madaxweynaha oo soo saaray Habraaca Amniga Doorashada – Radio Muqdisho
Guddiga doorashada Madaxweynaha oo soo saaray Habraaca Amniga Doorashada
Guddoomiyaha Guddiga Baarlamaanka ee Doorashada Madaxwaynaha Mudane Cabdiqani Geelle Maxamed ayaa farriin u diray Bulshada iyo daneeyayaasha Doorashada.
Waxa uu guddoomiyaha ka codsaday dhamaan Shacabka Soomaaliyeed ee uu saameynayo Bandowga inay u dulqaataan, gaar ahaan maalinkaa weyn ee ku asteysan 15ka may oo ku beegan maalintii SYL, ahna maalinka la dooran doono Madaxweynaha Dalka.
Dhanka kale Guddoomiyaha ayaa u cudur daartay Warbaahinta gaarka ah oo ka cabanayay in laga mamnuucay imaatinka goobta, waxa uuna u sababeeyay arimo amni iyo in la xaddido dadka goobta imaanaya. Waxa uu sheegay in ay ogsoon yihiin masuuliyadda ay dalka u hayaan iyo xaaladaha adag ee ay Warbaahinta ku shaqeyso.
Dhanka kale Maxamed Ibraahim Macalimuu oo ka tirsan guddiga ayaa aqriyay Habraaca Amniga Doorashada Madaxwaynaha iyo sharuudaha laga rabo Xildhibaannada, Musharraxiinta iyo ka qaybgalayaasha.
1- Waxaa la mamnuucay in goobta Doorashada ay ka dhacayso aanan lala imaan karin wax Ciidan ah loogana soo tago halkii loo qorsheeyay.
2- In aanan hoolka lala soo gali karin wax hub ah.
3- In aanan la ogoleyn Mobeel, Cumputer, Ipad iyo aalad kale oo wax duubta lana dhigi doono goobta ay u qorsheeyeen Guddiga.
4- In aanan hoolka lala imaan karin wax lacag ah.
5- In Hoolka dhexdiisa aanan laga dhax ololeysan karin bilowga doorashada kadib.
6- In 8:00AM ay dadku yimaadaan goobta loo qorsheeyay, halkaa oo gadiidka waaweyn ay ka soo daabuli doonaan.
7- In aanan hoolka lala imaan gawaari, isla markaana gaadiidka la dhigi doono halkii loogu tala galay.
Taliska Booliska oo waqtiga u kordhiyay xilliga Bandowga bilaabanayo